'Ngiyaziqhenya ngabafana bami,' kusho umqeqeshi weThe Citizens - Impempe
‘Ngiyaziqhenya ngabafana bami,’ kusho umqeqeshi weThe Citizens
January 25, 2021 January 25, 2021 Impempe.com
Umqeqeshi weCape Town City, uJan Olde Riekerink (osesithombeni), uthi uziqhenya kakhulu ngeqembu lakhe eliphule irekhodi leLamontville Golden Arrows liyishaya ngo 4-2 koweDStv Premiership, eCape Town Stadium, ngoMgqibelo.
I-Arrows bese kuphele imidlalo engu-11 yeligi igoloza ukushaywa nokwenza ibalwe namaqembu aphezulu kwi-log. Nokho ngeSonto ebuye itubekile yinduku ngemuva kokubhaxabulwa eKapa.
“Okokuqala ngijabula kakhulu ngomphumela. Ngicabanga ukuthi iqembu elishaya igoli kuqala bese lidedela amabili, bese kumele libuye lapho, lokhu kukhombisa ukuthi sinabadlali abasezingeni eliphezulu,” kusho uRiekerink.
“Ukuba yiqembu elingavumeli ukushaywa kalula kodwa sigcine sishaye amagoli amane emdlalweni, kuhle kakhulu. Umdlalo siwuqale kahle kakhulu, ngemizuzu engu-20 yokuqala bekuyithina ebesiphethe umdlalo sashaya negoli. Nokho ngemuva kwalokho sehlise izinga ngesiwombe sokuqala kodwa kumele sincome i-Arrows ngalokho.”
Ukuwina kweThe Citizens kuyinyusele endaweni yesine kwi-log yePremiership. Leli qembu laseKapa libukeka lenza kahle kakhulu ngaphansi komqeqeshi uRiekerink.
“Ngemuva kokudlala kahle kwe-Arrows ishaya amagoli amabili, sibuyile futhi ngicabanga ukuthi senze kahle kakhulu. Ngicabanga ukuthi abafana bami bebebahle kakhulu futhi ngiyaziqhenya ngabo,” kuphetha uRiekerink.
ICity izovakashela iBaroka FC emdlalweni weDStv Premiership ePeter Mokaba Stadium, ngeSonto ntambama.
Previous Previous post: ILeopards isixoshe umqeqeshi osanda kubukisa ngeBucs
Next Next post: Ngabe seyidayisiwe iTTM? Amahlebezi asho njalo